Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → octobre → 29 → Tapatapany
Redaction Midi Madagasikara 29 octobre 2015 0 Commentaire
# – Doro trano. Olona iray nosamborina. Taorian’ny nahamay trano roa niseho teny Ampefiloha Ambodirano, niseho ny 12 oktobra hifoha ny 13 oktobra, fantatra izao fa olona iray no nosamborin’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny biraon’ny polisy Ilanivato. Namoaka didy ny fitsarana ny hikarohana olona iray monina eny Antohomadinika. Tratra teny Anosy ity lehilahy ity, ny 27 oktobra. Rehefa nohadihadiana izy, dia nilaza fa tsy tompon’andrikitra tamin’io fahamaizana io.
# – Varotra sy fifohana rongony. Olona 8 voasambotra. Nahazo vaovao ny polisy miady amin’ny fihanahan’ny zavamahadomelina fa misy toerana maromaro teto Andrenivohitra ahitana mpivarotra sy mpifoka rongony. Nandeha teny amin’ireny faritra ireny ny mpitandro filaminana, ka fantatra fa olona valo no nosamborina. Teny Ivato, vehivavy iray no tratra nivarotra rongony. Fonosana 80 no hita tany aminy. Olona hafa ihany koa no tratra nifoka rongony teny Andraisoro. Mbola mpianatra ny roa.
# – Ampasika. Jiolahy tratra niaraka tamin’ny basy. Olona iray izay fantatra fa jiolahy no tratran’ny polisy avy eny Itaosy, teny Ampasika. Tratra tany aminy koa ny basy vita gasy fampiasany. Tamin’ny valan-dresaka teny amin’ny Toby Ratsimandrava omaly no nahafantarana izany. Anisan’ny faritra mena ny eny amin’ny toerana nisamborana ity lehilahy ity. Efa atao famotorana ao amin’ny biraon’ny zandary eny Itaosy izy amin’izao fotoana izao.